फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिको निर्देशन : क्याथोलिक पादरीको हत्या गरिदेऊ ! | Saajha Khabar
मनिला : फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेले क्याथोलिक पादरीहरुविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले आफ्नो मुलुकका क्याथोलिक पादरीहरुलाई ‘बेकामी मुर्ख’ भन्दै उनीहरुलाई हत्या गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार भाषणको क्रममा राष्ट्रपति रोड्रिगोले भने, ‘ती मुर्ख र बेकामी पादरीहरुलाई मारिदेऊ ! तिनिहरु आलोचना मात्रै गर्छन् ।’
स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । रोड्रिगोले फिलिपिन्समा रहेका क्याथोलिक चर्चलाई ‘अति ढोंगी संस्था’भन्दै आफूले पुज्ने देवता फरक भएको दावी गरेका छन् ।
‘मैले भगवानमा विश्वास गर्दिन भनेर कहिल्यै भनेको छैन । के मात्रै भन्छु भने तिमीहरुका भगवान मुर्ख हुन् । मैले पुज्ने देवता समझदार छन् । मैले पादरीहरुलाई भनेको यही हो । र मैले आफूलाई अनिश्वरवादी पनि कहिल्यै भनेको छैन ।’
फिलिपिन्सको जम्मा १० करोड जनसंख्यामध्ये ९० प्रतिशत जनसंख्या क्याथोलिक रहेको तथ्यांक छ । दुतेर्तेले भने धर्मको विषयमा यसअघि पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसअघि धर्म र ईश्वरमाथि नै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका उनले आलोचना भएपछि आफूले ठट्टा गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यही डिसेम्बरयता फिलिपिन्समा तीनजना क्याथोलिक पादरीको हत्या भइसकेको छ । यसबीचमा यहाँ क्याथोलिक र विरोधीबीच धार्मिक द्धन्द्ध हुँदै आएको छ । ‘तिनिहरुले हाम्रो समूदायको हत्या गरिरहेका छन्, हाम्रो नै हत्या गरिरहेका छन् । तिनिहरुले हाम्रो आस्थाको हत्या गर्दै छन् । र हाम्रो चर्चमाथि श्राप दिइरहेका छन्’ उनले झण्डै वर्षदिनअघि भनेका थिए ।
त्यसबेला पनि उनको विरोध भएको थियो । रोड्रिगो दुतेर्ते आफैँ क्याथोलिक क्रिश्चियन हुन् । तर उनका पछिल्लो अभिव्यक्ति यसविरुद्ध आएका छन् । आफ्नो आलोचना गर्ने कुनै नैतिक अधिकार नभएको भन्दै उनले क्याथोलिक चर्चविरुद्ध आलोचना गरेका हुन् । साथै उनले विश्वभर क्याथोलिक चर्चमा पादरीहरुले नै यौन हिंसा गर्ने आरोप पनि लगाएका थिए । उनले सन् २०१६ मा पनि यस्तै धार्मिक नेतृत्वमाथि आरोप लगाएर पछि माफी समेत मागेका थिए ।
उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर विश्लेषकहरुले भने दुई शक्तिशाली संस्था राष्ट्रपति कार्यालय र चर्चबीचको द्धन्द्धको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । २१ औं शताब्दिमा चर्च र राज्यबीचको द्धन्द्धको रुपमा उनीहरुले यो घटनाक्रमलाई टिप्पणी गरेका छन् ।
Previous: ‘नेपालका विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाउने तयारी
Next: शिखर शैलीमा बन्दैछ रानी पोखरी : सरकारले दियो साढे पाँच करोड